Vohitsara Toamasina 300.000 ariary no namonoana azy telo mianaka
Araka ny finoan’ny tatsinana, tsy raraka an-tany ny ra latsaka. Tra-tehaka ireo olon-dratsy telo ka vehivavy ny iray namono ny fianakavian’i Soa Monica tany Vohitsara Toamasina ny 13 mey teo.
Teratany vahiny ny iray miampy ny vady aman-janany Malagasy. Solosaina, finday ary lelavola mitentina 300.000 ariary no norobain’ireo nahavanon-doza. Nitsoaka nankany ambanivohitra antsoina hoe Masomeloka any Ambodibonara izay 60 km miala an’i Mahanoro avy hatrany izy ireo rehefa vita ny nataony. Niroso tamin’ny fikarohana ny polisin’i Toamasina ka tra-tehaka tany amin’io tanàna io ny 2 aogositra teo ny roa (lehilahy sy vehivavy). Ny iray izay fantatra amin’ny anarana hoe Z. kosa tafatsoaka.
Nifanolo-tanana tamin’ireo polisy ny mpiray tanana ka tra-tehaka ny 6 aogositra ity farany. Natolotr’izy ireo ny Borigadin’ny zandarimaria tao Masomeloka, ireto farany kosa no nitondra azy niakatra ny Kaomisaria tao Mahanoro, ary tao no nalain’ny polisin’ny « PJ-Tamatave » . Niaiky ny heloka vitany moa izy ireo, ary tamin’ny maritoa no namonoan’i Z. ilay teratany malagasy sy ilay zazalahy kely izay fito taona monja, ary ilay namany kosa namono ilay teratany vahiny tamin’ny kobay.